Bangaphi AbaMongameli beRiphabhliki?
AmaRephabliki abe ngumongameli waseUnited States
Kukho abameli baseRephablikhi abavela ku-Abraham Lincoln beqala ukuhamba njengeRiphabhlikhi ukuze banqobe umongameli ngo-1861. Nangona iqela leDemokhrasi liye lide lide kuneqela lamaRiphabliki , kukho kuphela abaongameli be-Democrat. Naba ngabaqalayo baseRephabliki bokuqala be-Republican ngokwemigomo yabo, kunye neendlela ezimbalwa zexesha elilodwa lomongameli kwi-ofisi. Inani le-19 liyi- Donald Trump .
UAbraham Lincoln : Ebonwa ngabaninzi kuba ngumbongameli kunabo bonke base-United States, uLincoln wahola eli lizwe ngemfazwe yalo kuphela, ekugqibeleni egcina inyunyana ye-United States yaseMelika. Isimemezelo sakhe sase-Emancipation samemezela ukuba izigqila kwilizwe elivukelayo zikhululekile ngonaphakade; Oku akuzange sikhulule izigqila kodwa kunokuba sitshintshe ubuso bepikiswano ukubandakanya ukulwa kwenkululeko yabantu.
Ulysses S. Grant : Isibonelelo sasiyintloko yombutho weManyano ngexesha leMfazwe yombutho kwaye yawunqoba uongameli ngo-1869 no-1873. Uongameli weeNgxowa-mali wayejongene nokuQulunqulwa koMzantsi emva kweMfazwe yombutho kunye neyesiGuqulelo se-15 ukuqinisekisa ilungelo lokuvota ngabemi bazo zonke iintlanga.
URutherford B. Hayes : Umongameli wexesha elilodwa likaHayes udla ngokuqhagamshelana nokuphela koKwakha kwakhona. Enyanisweni, abaninzi bakholelwa ukuba isivumelwano sakhe sokubamba imikhosi yombutho waseMzantsi (ekupheliseni ngokutsha ngokutsha kwakhona) kukhokelela ekunqubeni kuMongameli.
UJames A. Garfield : UGarfield wafa eofisini evela kwinqanaba lokulimala kwinyanga nje ezine kwixesha lakhe. Uphando lwakhe lwe-Star Route Scandal, olubandakanya amalungu ombutho wakhe, lukhokelela kwimibandela ebalulekileyo yokulungiswa kwenkonzo yomphakathi.
UCherster A. Arthur : UArthur wayengumongameli phantsi kukaJames Garfield, wangena njengoMongameli emva kokufa kukaGarfield. Wayenomlando wokulwa neziganeko zokulwa nobugqila njengegosa laseNew York. NjengoMongameli, ukhunjulwa ngoMthetho we-Pendleton Civil Service Act, owamisela ukuba imisebenzi karhulumente ibonelelwe ngokufanelekileyo, kungekhona ukudibanisa kwezopolitiko.
UBenjamin Harrison : Umzukulwana we-9 we-United States, uWilliam Henry Harrison, uBenjamin Harrison unelithuba elilodwa e-ofisi. Ulawulo lwakhe luphawulwe ngokulungiswa kwenkonzo yoluntu kunye namanyathelo okulwa namathenda. Kwibala elikhanyayo lezinto, i-White House yayifakwe inkonzo yombane phantsi kweHarrison, owayengathembeli izibane zombane ngokwaneleyo ukuba azisebenzise.
UWilliam McKinley : Ulawulo lukaMcKinley luye lwaphawula ngemfazwe yaseSpain-Amerika kunye nokuxhaswa kweHawaii. Wawunqoba u-1880 kodwa wabulawa kungekudala kwikota yakhe yesibili, wongezelela iimeko zesiqalekiso sikaTecumseh.
UTheodore Roosevelt : "I-Trust Buster" ithathwa njengowomongameli omkhulu waseMelika. Wayengumtsalane kwaye mkhulu kunokuphila. Wayeyena mncinci wabo bonke abaongameli, engena kwi-ofisi eneminyaka engama-42. Ngokungafani nabameli bakaRephabliki kamva, uRoosevelt walwela nzima ukunciphisa amandla e-oyile amakhulu kunye neenkampani zendlela.
UWilliam H. Taft : I-Taft ingaziwa kakhulu ngokuxhasa "iDollar Diplomacy," imbono yokuba umgaqo-nkqubo wase-US wangaphandle kufuneka unikeze uzinzo kunye nenjongo yokugqibela yokukhuthaza ama-American ventures. Wayenguye kuphela umongameli owayekhonza njengoBulungisa beNkundla ePhakamileyo (kunye neJaji eliyiNtloko kuloo.)
UWarren G. Harding : Unzima ukukhonza omnye nje untloni ngeminyaka emithathu, efa ngenxa yesifo senhliziyo ngelixa esesikhundleni. Ubongameli bakhe babone ukuphela kweMfazwe Yehlabathi I kodwa kwaphawulwa ngamacandal abandakanya ukufumbathisa, ukukhwabanisa kunye noqhinga.
UCalvin Coolidge : Coolidge wayengumongameli we-Under Warren Harding kwaye waphumelela ku-uongameli emva kokufa kukaHolding. Ukulawulwa kwakhe kuphawulwe kuMthetho wokuThunywa koMfuduko, ukuchithwa kweerhafu ezibekwe ngexesha leMfazwe Yehlabathi I, kunye nenkcaso yenkxaso-mali yeCommunity 'relief relief' ekukholweni ukuba urhulumente akufanele abe negalelo ekumiseni ixabiso lentengiso.
UHerbert Hoover : Imarike yemasheya yaphazamisa inyanga ezisixhenxe nje kwi-ofisi kaMongameli weHoover, yamshiya ephethe ixesha elibi kakhulu lokuPhukisa iNkulu. Unqobe amavoti angama-444 ukuba abe ngumongameli, kodwa kwiminyaka emine kamva waphulukana nesicelo sakhe sokubuyiselwa kwemida.
UDwight Eisenhower : Iqhawe lomkhosi, u-Eisenhower wayengumlawuli ophethe i-D-Day ukuhlasela kwaye emva koko waba ngu-5-star general. Wayeyilwaphulo-nxu lumene noluntu oxhasa inkxaso yokwandiswa kweengalo zenukliya emva kweMfazwe Yehlabathi II. Amanyathelo amaninzi okuqhutyelwa kwamalungelo omphakathi ayenzeka ngethuba lakhe lokumongameli, kunye nokudalwa kwendlela yeendlela zasemgangathweni kunye neNASA.
URichard M. Nixon : I-Nixon idume kakhulu, ngokuqinisekileyo, ihlazo lika-Watergate, eliye laholela ekutyunjeni kwakhe kwikota yesibili njengoMongameli. Ulawulo lwakhe lubona uhambo lukaNeil Armstrong kwinyanga, ukudalwa kwe-Arhente yoKhuselo lokusiNgqongileyo kunye nokuqinisekiswa kwesiHlomelo sama-26, ukunika abaneminyaka eyi-18 ilungelo lokuvota.
UGerald Ford : I-Ford inomsebenzi ohlukileyo wokuba ngumongameli kuphela ongazange anqobe unyulo kuMongameli okanye kwiNtloko kaMongameli. Wamiselwa nguMongameli we-Nixon emva kokuba uSpiro Agnew etshilo eso sithuba. Kamva, wangena njengoMongameli emva kweNixon.
URonald Reagan : URagag wayengumongameli omdala ukukhonza (de kube yiTragump) kodwa ukhunjulwa ngokuhlukana kwamanye amaninzi, kuquka ukuphela kweMfazwe yeCold, ukubeka umfazi wokuqala kwiNkundla ePhakamileyo, ekulingeni ukuzama ukubulala kunye ne-Iran-contra scandal.
UGeorge HW Bush : Mhlawumbi akhunjulwa njengomongameli ongenakulinganisekanga, umphathi we-Bush wayephethe iziganeko ezingaqhelekanga, kuquka ukuhlasela kwePanama kunye nokutshala kukaManuel Noriega, ukuThengiswa kweMali kunye nokuThengiswa kweMali, emva kwe-Exxon Valdez oyile, Umthetho wokukhubazeka, ukuhlukana kweSoviet Union kunye neMfazwe yasePersian Gulf.
UGeorge W. Bush : ukhetho lukaBush ngonyaka ka-2000 luhlala lugxininiswa yimpikiswano, kodwa inokukhunjulwa kakhulu ngokusabela kwakhe kwintlanzi yeSeptemba 11 kwi-World Trade Center kunye nePentagon, kungeyona nto ibandakanya iimfazwe ezimbini, e-Afghanistan nase-Iraq.
Into oyenzekayo Ngaba Wayengazi Ngomsebenzi weRadio Career kaRonald Reagan
Thomas Jefferson Biography - UMongameli wesithathu wase-United States
Indlela yokuthenga ubugcisa bakho
Ukuphulukisa ngamakristal: iRubies
Ngubani owasungula i-Umbrella?
Iifilimi Ezihlanu Nge-MDMA
I-Trine: Umbono woBomi beNdalo kunye noHlonic
Iindlela ezili-9 zokuthetha i-Goodbye ngesiTaliyane
I-Sagittarius kunye nePisces Uthando olufanelekileyo
Yintoni ebeka iingcamango?
Ukholo kunye neHolesi
Amazwe ama-5 apho iSpanish ikhulunywe khona kodwa ayiyiyo igosa
Yintoni Isibopheko Emzimbeni We-Mollusk?
I-Apollo 8 Izaliswe ngo-1968 ukuya kwithemba elithembayo